Kedu ka ígwè na-enweghị ígwè - 1aviagem.com
Gara aga post: Kedu ihe ị ga-atụ anya si na Philippines? Site na onye Filipino
Nkwupụta ozo: Ndụmọdụ ndị dị na Berlin - Germany - nlegharị anya 10
Edebere 14 February 2019 site Römulo Lucena
Oge gara aga
Tupu na Mgbe
Ndewo onye ọ bụla, taa bụ ngwụsọ ọsọ na ọ bụla onye nkwado ọ bụla kwesịrị ịma. Mgbe ị na-etinye uwe gị niile na akpa azu, akpa akwa, ma ọ bụ akpa ọtụtụ mgbe, ọ na-agwụ na-abịa niile crumpled. Ma ọ bụrụ na ị na-aga nanị ya na akpa aka ma ọ bụ dịka o kwere mee, eleghị anya i nweghị ígwè, ị?
Ma ugbu a, olee otu m ga-esi wụfu uwe m n'ejighị ígwè?
Dịrị ala, ọ bụghị ihe niile furu efu. Imirikiti ebe obibi na ụlọ mbikọ na-enye onye na-ekpocha ntutu isi. Ọ bụkwa ya na ọ ga-ekwe omume ịkwụsị uwe.
Ọnụ bụ iji windo na-ekpo ọkụ na gbatịa aka ya na-agbasa. Ọ bụrụ otú ahụ, ịnwere ike wetụ ntakịrị wetatụ.
Na nchịkọta bụ nke a: ikuku ọkụ + ìhè tug site na aka na njikere ị ugbua nwere akwa akwa n'ime nkeji ole na ole.
Na vidiyo dị n'okpuru na-egosi otu esi eme nke a.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ọnụ a, nwee ya n'ebe ahụ ma kesaa ya.
Daalụ. (maka nkọwa na akụkọ na-enweta map anyị n'okpuru.
Olee otú Ejiji ndị gara aga